I-Electrum Metal Alloy okanye iGold Green
I-Electrum Metal Alloy
I-electrum yinto ehamba ngokwemvelo yegolide kunye nesiliva kunye nenani elincinane lezinye izitye. I-alloy eyenziwe ngumntu negolide kunye neyesilivere ifana neekhemikhali kodwa ngokuqhelekileyo kuthiwa igolide eluhlaza .
I-Electrum Chemical Composition
I-electrum iqukethe igolide kunye nesilivere, ngokuqhelekileyo kunye nexabiso elincinci lentsimbi, iplatinum, okanye ezinye izinyithi. I-Copper, isinyithi, i-bismuth kunye ne-palladium ngokuqhelekileyo ivela kwi-electrum yendalo.
Igama lingasetyenziselwa nayiphi na i-alloy-silver alloy engama-20-80% yegolide kunye ne-20-80% yesilivere, kodwa ngaphandle kokuba i-alloy engokwemvelo, isinyithi esakhiweyo sichazwa ngokuthe tye ngokuthi 'igolide eluhlaza', 'igolide' okanye 'isilivere' (kuxhomekeka ukuba yeyiphi intsimbi ekhoyo kwisixa esiphezulu). Umlinganiselo wegolide ukuya kwisiliva kwinqutyana yemvelo iyahluka ngohlobo lwalo. I-electrum yemvelo efunyenwe namhlanje eNtshona Anatolia iqulethe i-70% ukuya kwi-90% yegolide. Ininzi imimandla yombane we-electrali yamandulo iyimali yemali, equlethe ixabiso elincinci legolide, ngoko kukholelwa ukuba izinto ezibonakalayo zatshintshwe ngakumbi ukugcina inzuzo.
Igama le- electrum sele lisetyenzisiwe kwi-alloy ebizwa ngokuba nesilivere yesiJamani, nangona le yelinye isilivere enemibala, ayiyiyo eyakhiweyo. Isilivere saseJamani ngokuqhelekileyo iqukethe ubhedu obungama-60%, i-nickel engama-20 kunye ne-20% ye-zinc.
Uhlobo lwe-electrum lwendalo lunebala ukusuka kwigolide eluhlaza ukuya kwigolide eqaqambileyo, ngokuxhomekeke kwisixa segolide ekhoyo kwi-alloy.
I-electrum ene-Brassy enemibala enophezulu. Nangona amaGrike amandulo abiza igolide yensimbi emhlophe , intsingiselo yanamhlanje yegama elithi " igolide elimhlophe " libhekisela kwi-alloy ehlukeneyo enegolide kodwa ibonakala i-silvery okanye imhlophe. Igolide eluhlaza okwangoku, ephethe igolide nesiliva, ngokwenene ibonakala ngathi iluhlaza.
Ukongezwa ngokukodwa kwe-cadmium kunokunyusa umbala oluhlaza, nangona i-cadmium inetyhefu, ngoko ke umda wokusetyenziswa kwe-alloy. Ukongezwa kwe-2% ye-cadmium kuvelisa umbala oluhlaza, ngelixa i-4% ye-cadmium ityala umbala oluhlaza. I-Alloying ngeethusi ityebisa umbala wensimbi.
Izakhiwo ezichanekileyo ze-electrum zixhomekeke kwizinyithi kwi-alloy kunye nepesenti zazo. Ngokuqhelekileyo, i-electrum ine-reflectivity ephezulu, ngumqhubi obalaseleyo wokushisa nombane, i-ductile kunye ne-malleable, kwaye iyanqandwa ngokukhawuleza.
I-electrum isetyenzisiwe njengemali, ukwenza iingubo kunye neendwanguzo, izitya zokusela, kunye neengubo zangaphandle zeipramamidi kunye ne-obelisks. Iingqekembe zokuqala ezaziwa kwihlabathi leNtshona zenziwe nge-electrum kwaye zahlala ziyaziwa kakhulu kwiingqekembe ukuya kwi-350 BC. I-electrum iyanzima kwaye ihlala ihlala kunexesha elide kunegolide ecocekileyo, kunye neendlela zokucocwa kwegolide zazingaziwa kumaxesha amandulo. Ngaloo ndlela, i-electrum yayiyinto ethandwa kakhulu kunye nexabiso elixabisekileyo.
Njengentsimbi yesendalo, i-electrum yatholakala kwaye isetyenziswe ngumntu wokuqala. I-electrum yayisetyenziselwa ukwenza iimali zesilivere zokuqala, ezithandana ubuncinane kwi-3rd millennium BC eYiputa.
AmaYiputa ayesebenzisa isinyithi ukuba agqoke izakhiwo ezibalulekileyo. Izitya zokusela zokudala zenziwe nge-electrum. Iindondo zeNobel zanamhlanje zenziwe ngegolide eluhlaza (i-electrum ehlanganisiweyo) yenziwe ngegolide.
Ngaphandle kokuba u tyelele iimyuziyam okanye uzuze umvuzo weNobel , ithuba elihle lokufumana i-electrum kukufuna i-alloy yemvelo. Kwixesha la mandulo, umthombo oyintloko wamandla kagesi kwakunguLidiya, malunga noMlambo wasePactolus, umgcini weHermus, obizwa ngokuba nguGediz Nehriin eTurkey. Kwihlabathi lanamhlanje, umthombo oyintloko oyisisombululo nguAnatolia. Inani elincinane linokufumaneka kwi-Nevada, e-USA.
Qamba ii-Alkanes zokuqala ezi-10
Amaqela aSebenzayo aqhelekileyo - i-Organic Chemistry
I-P - Organic Compounds
Luphi uhlobo lweebhondi Ngaba ifomu leCarbon?
Iyiphi i-Petroleum Jelly? Ukwakhiwa kweMikhali
Iintsingiselo zeMigodi yeWavy kwiZakhiwo zeSkeletal
I-Geometric Isomerism - iCis neTrans
Izakhiwo zeMichiza eziQala ngeNcwadi X
Indlela yokubhala i-Biography enomdla
I-Long Island University Post Admissions
Uluhlu lokuPhononongo lwaManejala: ii-Essential Site
Spotfin Croaker: uKumkani wePasif Surf
Ingcongolo v. Ingcongolo: Ukuxhatshazwa kweNgcaciso yoSondo
I-Biology Prefixes kunye ne-Suffixes: -stasis
'Tinkle, Twinkle Little Star' Chords
Iingxabano kunye Nokulwa Nezilwanyana
Yintoni Ibrahman Ethethayo KwiNkolo yamaHindu?
Izandi Zezilwanyana eJapan
Iibhokhwe ezimnyama kunye neHauty Radiation
IiRhymes zoLondolozo: Zonke iintlobo
Yenza kwaye usebenze Izicelo kunye neeFayile kwiCode Delphi
Iiminyaniso zeBhayibhile malunga nethemba labafana abangamaKristu
I-Dream Theater - Ukuhlaziywa Okumangalisayo
Ukufa Okubuhlungu KwesiFrentshi Cabaret Sweetheart Edith Piaf
I-Chicomoztoc - Indawo yeNgqungquthela Yokuqala yama-Aztec
I-Synoptic Scale neMesoscale Weather Systems